Torohevitra isankerinandro ho anao momba ny fanoratana: : Aza atao tsinontsinona ny fandalinana ataon’ny governemanta Shinoa amin’ny fanehoankevitry ny daholobe ety anaty aterineto · Global Voices teny Malagasy
Torohevitra isankerinandro ho anao momba ny fanoratana: : Aza atao tsinontsinona ny fandalinana ataon'ny governemanta Shinoa amin'ny fanehoankevitry ny daholobe ety anaty aterineto
Voadika ny 23 Jona 2019 5:23 GMT
Manodidina ny 2 tapitrisa ireo mpandalina fanehoankevitra anaty Aterineto ao Shina. Sary avy amin'ny Voice of America.
Manambatra ireo fomba fanoratana sy fanaovana tatitra tsara indrindra ao amin'ny Global Voices ny Weekly Writing Tips (Torohevitra isankerinadnro momba ny fanoratana). Ho entin'i Oiwan, mpamoaka lahatsoratra ho an'i Azia Avaratra Atsinanana, ho anao ny torohevitry ny volana Oktobra
Vao mainka miha-sarotra ny fanangonana ny hevitry ny mponina anaty aterineto eny amin'ireo filazambaovao sosialy Shinoa noho ny sivana henjana misy.
Voalohany, vitan'ireo milina mpanivana ny mamafa anaty minitra vitsy fanehoankevitra iray manakiana ahitàna teny manohintohina ara-politika. Faharoa, vitan'ireo mpanivana ihany koa ny manafina ny lahatsoratra navoakan'ny olona iray tsy ho hitan'ny daholobe ary tsy mila milaza amin'ilay tompony. Fahatelo, raha misy mpampiasa aterineto, na lahy na vavy, mamoaka zavatra tsy azony porofoina ny fahamarinan'izany, azo ampangaina ho mpanely tsaho anaty aterneto ny tenany. Fahefatra, ireo mapnefa saimbahoaka tena tsy miankina kokoa dia nahazo fampitahorana ary “tambatambazana”, ny taona 2013, olo-malaza maro no nalaina baraka ampahibemaso tamin'ny fisamborana sy fanamelohana maro toy ny fanohanana ara-bola fihetsiketsehana na fivarotantena .
Nisafidy ny hangina ny ampahany betsaka amin'ny mpampiasa aterneto, raha toa ka nifindra any amin'ny WeChat ny sasany mba hahafahan'izy ireo maneho ny heviny aminà vondrona namana vitsivitsy kokoa. Nobahanan'ireo “Miaramilan'ny sivilizasiona” an-tapitrisany ny habaka natao ho an'ny daholobe ety anaty aterneto izay arindran'ny Ligin'ny Tanora Kaoinista mba hanapariaka “onja miabo”. Sarotra ho an'ny mpanaramaso ny mamantatra ny tena hevitry ny olon-drehetra mikasika ireo olana saropady raha ireo resadresaka anaty aterineto no jerena.
Ny tatitra lasa lavitra indrindra momba ny hevitry ny daholobe ety anaty aterneto izay mety ho hitanao an-tserasera dia nosoratan'ireo mpandalina rakitra karamain'ny governemanta. Tombanana ho yuan an-tapitrisa no lanian'ny governemanta Shinoa amin'ny fampiasàna mpandalina ny hevitry ny daholobe ho “fikojakojana ny filaminana”. Mahazo alalàna miditra amin'ny angon-drakitra anaty aterneto ireny mpandalina ireny mba hanoratany ny tatitrany.
Ny sasany amin'ireny tatitra ireny dia antontan-taratasy niparitaka, toy ilay tatitra momba ny ezaka fanefena ny hevitry ny daholobe tao amin'ny Akademia Yenching, izay nozarainy ho an'ireo mpikambana anatin'ny antoko tao aminy ihany, izay tomponandraikitra amin'ny fandrindrana ilay fanefena ny hevitry ny vahoaka. Hita anatin'ireny tatitra ireny ny torohay sarobidy mampahafantatra mazava ny fomba hikirakiran'ny governemanta sy ny Antoko Kaominista Shinoa ny vaovao ety anaty aterneto ary ny fomba hakan'izy ireo lesona avy amin'ny zava-nitranga tsirairay mba hanatsarany ny fanefen'izy ireo hevitra.
Azon'ny rehetra alaina anaty aterneto ny karazana tatitra faharoa. Ohatra, manana anjara ao amin'ny Yuqing (hevitry ny daholobe) ny people.cn, manana fifandraisana amin'ny antoko ary ny ankamaroan'ny tatitra ao dia nosoratan'ireo mpandalina ny hevitry ny daholobe avokoa izay mampiasa fandalinana angon-drakitra midadasika be, mandinika ny fanehoankevitry ny daholobe, na izany eny anatin'ireo mahazatra, na anaty aterneto ary manolotra fanatsarana ny politika.
Mazava ho azy, tsy hoe saropady ara-politika avokoa ireo tatitra aseho ampahibemaso ary tena nosoratana an-kitsipo. Kanefa tatitra manasongadina olana ara-sosialy goavana miaraka amina torohay sy angon-drakitra tena tsara fototra. Raha “averintsika amboarina” ireny, dia afaka hanampy ny vahiny hahazo bebe kokoa ny fiarahamonina Shinoa.
Ahoana hitaterana azy ireny nefa tsy miala amin'ny tsipika ofisialy ? Indreto ny sasantsasany amin'ìireo dingana arahiko :
1.Mametraka andiam-panontaniana iray hafa
Ny ankamaroan'ny tatitra dia nosoratana niainga avy amin'ny fomba fijerin'ny governemanta mba hitadiavana vahaolana amin'ilay olana resahana. Ho an'ireo mpandinika hevitra indray, ny fanontaniana hapetrany dia ny hoe ahoana no tokony hiatrehan'ny governemanta izany olana izany. Matetika, adinony na fadiany ny mitady izay fototr'ilay olana. Rehefa averina jerena anefa ilay torohay, azontsika ato ny manomboka amin'ireo fanontaniana tsotra, toy ny hoe Inona no mahatonga ireo olana ary mamaly azy ireny ho an'ireo mpamaky.
2. Fenoina ny fanazavana tsy ampy
Mba hisorohana ny fifandirana ara-politika, matetika misy ampahan-javatra tsy voalaza foana ao anaty tatitra, tahaka ny adihevitra, ireo sangy ratsy na fanehoankevitra manakiana. Andramo ny mameno izay fanazavana tsy ampy amin'ny alalan'ny fikarohana any anaty media sosialy Shinoa na ireo vohikala mpanohitra.
3. Fantaro ireo tenifototra ary amarino tsirairay any amin'ireo sehatra tsy voasivana
Malaky be amin'ny famoahana lahatsoratra mafana momba an'i Shina ireo vohikala Shinoa any ivelany sy ny Twitter. Tsara foana ny mampitaha ny tatitra noresahin'ireo tatitra mpanohana ny governemanta amin'ny an'ireo mpanohitra na sehatra hafa tsy voasivana amin'ny alalan'ny fikarohana tenifototra.
4. Trandraho ny ambadik'ireo olana tety anaty aterneto
Ny tany ambadika dia afaka hanampy anao hamantatra izay tsy ampy ao anatin'ny tatitra ofisialy ary hanampy hevitra manodidina an'ilay tantara.